Xog: Farmaajo oo berri u baxaya safar dibadda ah – Yaa u yeeray? | Dalkaan.com
Home Warkii Xog: Farmaajo oo berri u baxaya safar dibadda ah – Yaa u...
Xog: Farmaajo oo berri u baxaya safar dibadda ah – Yaa u yeeray?
Muqdisho (dalkaan)-Sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo muhiim ah oo Madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan waxaa berri safar dalka dibadiisa ah u bixi doona Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Isniinta berri ku wajahan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxuuna safarka Addis Ababa noqonayaa kii ugu horeeyey ee Farmaajo uu dalka uga baxo, tan iyo 25-kii bishii April, xilligaas oo Muqdisho ay ka dhaceen qalalaase iyo isku dhacyo hubeysan oo looga hortegay mudo kororsigiisii labada sano ahaa.
Sida aan xogta ku helnay Farmaajo waxaa lagu martiqaaday caleema saarka Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo bishii June Xisbigiisa talada dalkaas haya uu ku guuleystay doorashadii dalkaas ka dhacday.
Previous articleDaawo: Muxuu Axmed Madoobe ka yiri xiisadda Ahlu-Sunna iyo Galmudug?
Next articleGoolka Mo Salah waxaa ka hadlay Tababaraha Kooxda Jurgen Klopp iyo Xidigaha kale ee Kooxda
Club Brugge 1-5 Manchester City, Blues oo Xasuuq u geysatay kooxda...
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xasuuq kaga jawaabtay guul-darradii PSG ee kulankeedii Paris, waxaanay si xun u burburisay Club Brugge oo ay...
Al-Shabaab oo khasaare lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay JANAALE